Uhlu lwefeksi laseNew Zealand | Thenga Uhlu lweFekisi | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwefeksi lebhizinisi laseNew Zealand
New Guinea B2B Izinhlu zeFekisi
Ungahlukanisa uhlu lwe-Fax Business Business Fax, bese ukhetha ukuthumela amafeksi kulawo ocabanga ukuthi azophendula ekunikezelweni kwakho. Kusebenza kumgomo ofanayo njengokuthumela izingcingo, njengoba abathengisi bethumela okunikezwayo noma ukukhangiswa ngamafekisi kumakhasimende angaba khona, ngethemba lokuvula izimakethe ezintsha zemikhiqizo yabo. Ungaqala ngokukhangisa ngefeksi ngokushesha futhi kalula ngokuxhumana nathi namuhla usebenzisa imininingwane ekhonjiswe ohlwini lwethu lwe-Fax Xhumana nathi Ngekhasi Lentengo.
Uhlu lwefekisi lusiza ekwakheni ibhizinisi elisha, ngakho-ke uma kungokokuqala ngqa ukuthi uxhumeke ekuholeni okusha kwebhizinisi, ufuna ukuqiniseka ukuthi banesizathu esiqinile sokukhipha umphakeli wabo wamanje noma bacabangele ukusebenzisa ibhizinisi lakho.
Thenga Izinhlu zeFekisi Ezintsha nezivuselelwe eNtsha
Izindleko Eziphelele: $ 1,350
ISIQONDISO SEZIMALI ZAMAHHALA ZEALAND ZEXAND
Ifeksi ethembekile iyisidingo samabhizinisi amaningi, izinombolo zefekisi ziyadingeka kunoma yimuphi umkhankaso wefeksi futhi okubhekiswe kuzo, izinombolo zefeksi ezidingekayo zibalulekile empumelelweni yebhizinisi.
Ukukhetha, uhlu lwefekisi lebhizinisi laseNew Zealand kuyindlela enhle yokwenza ibhizinisi lakho ngaphezulu kwezinkampani ezithengisa kakhulu ikakhulukazi ezweni laseNew Zealand. Yiba nokunemba okungu-100% nohlu olusha lwefeksi lebhizinisi ngokuqhathanisa namanye amasayithi enkampani.
Idathabheyili Yokugcina Yamahhala noma i-latestdatabase.com yindawo ethembekile kunazo zonke yokuletha uhlu lwezinombolo zefeksi zebhizinisi, mayelana namagama abo ebhizinisi, izinombolo zefekisi, amakheli nekhodi yendawo. Kule datha ungaqinisekisa iklayenti lakho elilindelayo ukuthi zingathola ngokuphelele izikhangiso zakho zemikhiqizo. Ukwenza ukwazi ukumaketha futhi uthengise yonke imikhiqizo nezinsizakalo zakho ezinkampanini ezifanele ezingaba khona, lokhu kungenza ukusakazwa okubanzi kwefeksi kuphumelele futhi kuthembeke kumakhasimende.
Uhlu lwefeksi lebhizinisi laseNew Zealand kusuka eDathabheyini Yokuposa Mailing noma i-latestdatabase.com iqukethe okulandelayo:
Abangu-46,750 bavuselelwa ngemininingwane ephelele eqoqwe kusuka kumaqophelo ahlukahlukene ebhizinisi athembekile
Ukukunikeza intengo efanelekile efinyelela ku- $ 1,350
Uhlu lweFekisi laseNew Zealand Umbuzo nezimpendulo